Isixazululo seSoftware 1c: ama-patch kanye nama-frames yizona ezisiza kakhulu enhlanganweni.
Phakathi kwesofthiwe eminingi ekhishwe yi-1C, esinye sezixazululo ezithandwa kakhulu futhi ezidumile yilona uhlelo lweholo le-1c nabasebenzi. Lolu hlelo lwadalwa ukuze luzenzele ngokugcwele inqubomgomo yabasebenzi yenhlangano beselala izinkokhelo zabasebenzi bayo. Uhlelo lwe-1s lomholo nabasebenzi, olukhishwe ngo-2010, lunegama elinye - 1s: ukuhola kanye nokuphathwa kwabasebenzi.
Lolu hlelo luyisixazululo esakhiwe ngokuhambisana nobuchwepheshe besikhathi samanje nezindinganiso, kusekelwe kwipulatifomu yetheknoloji enamandla kanye neminyaka eminingi yokuhlangenwe nakho kule nsimu. Ngenxa yalokhu, ungasho ukuthi uhlelo lwe-1c lokuphathwa kwabasebenzi yisisombululo esinikeza amandla okusebenza okwedlulele kakhulu ekulawuleni abasebenzi kunoma iyiphi inhlangano, kungakhathaliseki ukuthi isilinganiso salo nesiqondiso somsebenzi.
Izici zokusebenzisa uhlelo 1c: umholo kanye nokuphathwa kwabasebenzi.
Isofthiwe 1s umholo kanye nokuphathwa kwabasebenzi yisinqumo, esakwazi ukuxazulula izinkinga eziningana, phakathi kwazo:
- Inhlangano yokuqeqeshwa kwabasebenzi benhlangano;
- Ukuqhuba ubufakazi bokusebenza;
- Izibalo zabasebenzi be- Payroll ;
- Ukuzenzekela kokusebenza kwehhovisi emsebenzini wezinsizakalo zenhlangano;
- ukubalwa kwezindleko zentela ezihlinzekwe ngumthetho weRussian Federation;
- ukuphathwa kwezinkokhelo zokukhokha kwabasebenzi benhlangano;
- ukudweba amapulani ngezidingo zenhlangano kubasebenzi;
- Ukudalwa kwezinto eziphathekayo zabasebenzi benhlangano kanye nokuphathwa kwayo okulandelayo.
Amafomethi we-1c, angathengwa kunoma yisiphi isitolo esinobuchwepheshe besofthiwe, inikeza ithuba lokuqhuba wonke umsebenzi ohlobene nokubika kanye nokubika ensimini eyodwa yolwazi. Amadokhumenti angenziwa kokubili egameni lenhlangano eyodwa futhi ngesikhathi esifanayo kusuka ezinkampanini eziningi eziyingxenye yokubamba. Njengezinhlangano, izinhlangano zomthetho ngabanye noma osomabhizinisi ngabanye bangase benze futhi.
Uhlelo 1c: umholo kanye nabasebenzi kusekelwe kwipulatifomu enamandla yezobuchwepheshe 1c: ibhizinisi 8, enikeza uhlelo lwakwa-interface olusimanje, olulula ukusebenzisa, oluyi-ergonomic. Konke lokhu kwenza ukuthi kutholakale uhlelo lokusebenza olusebenzayo olucacile ku-1c: ibhizinisi 8. Phakathi kwazo, ungaqokomisa ngokukhethekile:
- ukutholakala kohlelo lwamathuba omhlaba jikelele, okuvumela ukusebenza, kokubili imibhalo ephrintiwe kanye neyomshini, engashintshaniswa nge-e-mail;
- kungenzeka ukuqhutshwa kweqembu kwamadokhumenti ahlukahlukene kanye nezinkomba zenhlangano;
- kungenzeka ukuthi wabelane nokufinyelela kolwazi lwenhlangano yabasebenzisi abahlukahlukene besistimu. Ukulungiswa komuntu ngamunye ezindaweni zakhe zokusebenza;
- kungenzeka ukuhlanganiswa ohlelweni lokucubungula kwangaphandle, kanti kusekhona ithuba lokuvimbela ukufinyelela kwabasebenzisi ngabanye;
- ikhono lokusetha usuku lohlelo, emva kwalokho okuvunyelwe ukwenza noma yiziphi izinguquko noma izinguquko kudatha;
- kungenzeka ukuxhuma amafomu angeziwe kumadokhumenti ashicilelwe;
- ikhono lokuxhuma abasebenzisi abengeziwe ukuze kusetshenzwe futhi kugcwaliswe izingxenye zetafula kumadokhumenti enhlangano.
Uma unqume ukuthi u-1c umholo kanye nabaphathi bezisebenzi ukuthenga, khona-ke ungayenza nganoma yisiphi isikhathi esikahle kuwe esitolo se-Inthanethi "I-Market 1c". Lapha uzothola ukhetho olubanzi lwezinye software kusuka kumenzi "1C".
Ikhadi lokulinganisa ucingo: izici zokuklama